Hordhac: Barnaamijka Cilmiga Xanaanada Xoolaha Qeybtii 1aad | idalenews.com
Home Xoolaha & Beeraha Hordhac: Barnaamijka Cilmiga Xanaanada Xoolaha Qeybtii 1aad
Xoolaha: waa noole leh dareen iyo dhaqdhaqaaq iskooda ah(voluntary movement),oo ay u baahan yihiin( oxygen);iyo calaf(organic food). calafku waxaa laga soo jeebey ama laga keeney dhirta, waxeyna u baahan yihiin daryeel ama ilaalin, cunto siin iyo biyo; si looga helo manaafacaad sida; hilibka,caanaha,subaga,haraga iyo burcadka.
Xoolahu waxaa lagu dhaqdaa daafaha aduunka oo dhan gaar ahaan waxey laf dhabar u yihiin dhaqaalaha dalka soomaaliya. xoolahu way xanuunsadaan sida aadanaha oo kale , waxeyna u baahan yihiin daryeel caafimaad,silooga helo manaafacaad.waxeyna dadka qaar ay u isticmaalaan gadiid ahaan, qodista beeraha iyo soo saarista biyaha ee ceelasha dhaadheer.
Dadka iyo xoolahu waxa u dhexeeya oo kaliye waa garaadka waa sida ay aamin san yihiin culumadda sayniska xoolaha. wax soo saarkooda waxa saameyn ku leh degaanka ama bay’adda ay ku nool yihiin iyo habdhiska dhulka (topography).
Xoolaha aynu ka hadli doono ayaa waxey kala yihiin: Geela,Lo’da Riyaha, Idaha, Dameeraha iyo weliba Digaaggadda. ayadoo ay jiraan kuwo laysku dhahaa PETES-(Eeyga,bisadda iyo doofaarka) kuwan kamahadli doono madamaa wadankeena aan lagu aqoonin dhaqashadoodi.
Waa Maxay Cilmiga Xanaanada Xoolaha?
Cilmigga xanaanadda xoolaha waa laan kamid ah laamaha sayniska,waxa loola jeeda barashadda daaweynta (treatment),ka hortaga cuduradda xoolaha ku dhacaa ,baadhistooda(diaganosis) iyo in lala socdo is beladda neefka had iyo jeer. waana cilmi balaaran kaas oo daboolayo baahidda xoolaha,sida; labadda xayawaan ,dab joogda iyo duur joogda( domesticated&wild animals).
Cilmiga xanaanadda xoolaha waxaa si wanaagsan u caawiyaa ama u ilaaliyaa caafimaadka dadka(human health),maadaama ay dadku xoolaha ay ka helaan cad ,subag iyo caano taas oo saamayn ku yeelanaysa caafimaadkooda.
Waxaa jiraa cuduro Isu gudbo dadka iyo Xoolaha oo la yirahado “ZONOOTIC DISEASES” waa Infection ka gudbaa xoolaha una gudbaa dadka tusaale ahaan (Brucellosis ,Rabies iyo Kuwo kale).
Waxyaabaha aynu Kusoo qaadan doono Barnaamijka Taxanaha Ah Ee Xanaanada Xoolaha waxa kamid ah.
Waa maxey cilmiga xanaanadda xoolaha?
Tariikhadda cilmiga xanaanadda xoolaha.
Abla-ableyta guud ee xoolaha nimcooleyda ah (artiodactyla) ah iyo degaagadda.
Dhaqashadda xoolaha faa’idooyinka ay leedahay.
Cuduradda guud ee xoolaha
Cuduradda xoolaha dalka soomaaliya iyo daaweyntoodi
Cuduradda isu gudba dadka xoolaha(Zoonotic Diseases).
Calafsiinta xoolaha iyo Waraabinta
Talooyin la siinayo dadka xoola dhaqatadda ahi iyo kuwa doonaya in ay sameysataa xoolaha.
Wax yaabaha la gudboon qof aan ka agdhaweyn dhakhaatiir xanaanadda xoolaha wixii uu sameyn lahaa (where there is no vet).
Cuduradda guud ee degaagadda.
Hababka la isku abaahiyo xoolaha.
Xero kasaarka neefka( culling system).
Doorashadda neefka tarankiisu wanaagsan yahay iyo kana aan wanaagsaneyn.
Daryeelka neefka irmaanka ah iyo uurleyda.
Lisidda xoolaha iyo kuwo kale.
W/Q: Xasan Ismaciil Isaaq
Previous articleDaawo: RW, Itoobiya Oo Shaaciyey In Ay Wiiqantay Awooda Al-shabaab
Next articleDaawo: Sheekh Maxamed Idiris Axmed Oo U Digay Madaxda Dalka
maryam aadan May 30, 2015 at 2:05 pm